HomeWararka MaantaTaageerihii Muuska Ku Soo Tuuray Alves Oo Villareal Ciqaab Adag Marisay
Villarreal ayaa cadaysay inay ka mamnuucday garoonkeeda taageerihii xabada muuska ah ku soo shiiday Dani Alves ciyaartii La Ligaha ee Axadii ku dhex martay garoonka El Madrigal, Villareal iyo Barcelona.
Ciyaaryahanka Reer Brazil ayaa dhulka ka qaaday oo intuu galka ka dhilay cunay xabadii muuska ahayd ee lagu soo tuurey wakhti uu isu diyaarinayay inuu laago kubad koorne ahayd oo Barcelona Loo dhigay, ciyaartu markii ay dhamaatay wuxuuba uga mahad celiyey khudrada uu u soo tuuray taageeruhu.
Intaa kadib, kooxda Villareal ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay xaqiiqsatay oo soo heshay taageerihii falka sameeyey , xayiraadna ku soo rogtay, isla markaana aan laga iibin doonin tigidh ka lagu gallo garoonka naadiga ee El Madrigal inta noloshiisa ka dhiman, waxaanay nidar ku mareen inay la dagaalamayaan, cunsuriyada iyo Jinsi nacaybka.
“Villarreal CF waxay doonaysaa inay dunida u cadayso in naadigu si qoto dheer u qoomamaynayo una cambaaraynayo dhacdadii shallay (Axadii) markii ay socotay ciyaarta aanu la ciyaaraynay FC Barcelona, taasi oo uu taageere walax ku soo dhex tuuray garoonka El Madrigal,” ayay ku yidhaahdeen qoraal rasmi ah oo lagu baahiyey barta Internet ka ee naadiga.
“Waxaan uga mahad celinaynaa ciidanka amaanka iyo dedaalkii badnaa ee lagu hellay shaqsiga midab takooraha ah, naadigu hore ayuu u cadeeyey waxa uga meel yaala qofka sameeya falalka noocan ah, waxaanu go’aan saday in la xayiro oo tigidhada laga saaro kaadh kiisii soo gallida garoonka, si ku meel gaadh ahna xayiraad looga saaro awoodii gallitaanka garoonka El Madrigal stadium.
“Mar labaad naadigayagu wuxuu jecel yahay inuu sharaxo sida fog ee uu uga dhegan yahay iyo jacaylka uu u qabo, ixtiraamka binu aadamka, sinaanta, ciyaaryahanimada iyo qadarinta ciyaaraha marka lagu jiro garoonka iyo marka aan lagu jirin labadaba.”
Manchester City Oo Soo Koobtay Faraqii Dhibcaha Chelsea